Floorkwanyere flooring bụ ọsụ ụzọ nke ala-carbon gburugburu ebe obibi-News-Topflor China ejedebeghị
Floorlọ PVC bụ onye ọsụ ụzọ nke nchebe gburugburu ebe obibi dị ala
Echiche:54 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-11-13 Mmalite: Saịtị
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mba ahụ ewepụtala usoro atumatu ike nchekwa ego, ụlọ ọrụ na-ere ala na ụlọ ga-ahọrọ ngwaahịa ọhụrụ, obere carbon, na ngwaahịa nwere gburugburu ebe obibi mgbe ha na-azụ pvc. A na-eji ala PVC eme ihe n'ọtụtụ akụkụ nke ụlọ na azụmahịa n'ihi usoro ya bara ụba na agba dị iche iche. Enwere ike iji ụlọ PVC mee ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ebe ọha na eze, nnukwu ụlọ ahịa, azụmahịa na ebe ndị ọzọ. Nhọrọ a ga - eme ka ọpụpụ nke nchekwa na - enweghị nchekwa na gburugburu ebe obibi dị na gburugburu ụlọ ọrụ, ma n'otu oge ahụ na - akwalite mmepe nke ụlọ ọrụ ụlọ na obere carbon na gburugburu ebe obibi, na-ebu otutu carbon dikwa ohuru, ulo oru mmekorita gburugburu ebe obibi, na ulo oru mmeghe nile gha eweta New Era.
Nchedo gburugburu ebe obibi nke ala PVC nwere ike ibu ụzọ gosipụta na ala ala. Ma ọ bụ n'ihi nsogbu ahụike nke ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ nchegbu maka ngwaahịa teknụzụ nwere mmetọ gburugburu ebe obibi, ndụ ndị na-azụ ahịa na-akawanye mma site na ngwaahịa ala nke ejiri ogwe ndị nwere gburugburu ebe obibi. Ka ọ dị ugbu a, bọọdụ mkpụrụ osisi, MDF na bọọdụ ndị ọzọ n'ahịa dị na mba anyị eruola ogo nke imeziwanye ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi, ọ na-esikwa ike igbo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche. Nke a chọrọ mkpa iji lekọta mmepe nke agụmakwụkwọ ahụike n'okporo ụzọ nke carbon gburugburu ebe obibi dị ala na ụlọ ọrụ ụlọ site na ịdebe iwu ọkọlọtọ maka usoro njikwa.
N'ahịa na-agbanwe agbanwe, e nwere ụfọdụ ihe mkpuchi ala plastik, mana na mgbọrọgwụ ha, ala PVC ọ nwere ụlọ ọrụ ndị maara n'ezie mkpa ndị ahịa, ma ahịa ahụ arụla ọrụ ya site na isi iyi ya? Isi ihe nkwado nke ahịa ọ bụla bụ ngwaahịa ahụ. Ọ bụrụ na etinyeghị ntọala ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ya na ngwaọrụ ahịa dị irè esonyere ya, ọ nwere ike ime ka ala ụlọ mepụta ụlọ ahịa na-ada. Ya mere, iji gboo mkpa nke ndị na-eri ngwaahịa na iji mezuo mkpa nke ndị na-azụ ahịa, ụlọ ọrụ ụlọ dị iche iche kwesịrị iche echiche banyere ụfọdụ ihe site na ndị ahịa, mee ihe, ghọta mkpa ndị ahịa n'ezie, ma mepụta ngwaahịa ha maka ndị ahịa. Styledị ịhụnanya, gbalịsie ike ka ndị ahịa nabata gị, ma nweta ọrịre kachasị elu.
Ikpe ikpe site na ọnọdụ ahịa dị ugbu a, dịka ụlọ ọrụ nwere njikọ chiri anya na gburugburu ebe obibi, ihe ụlọ ụlọ dị ka ala ụlọ PVC ga-abụrịrị ndị ọsụ ụzọ nke nchebe gburugburu ebe obibi dị obere. Echiche nke obere carbon na nchebe gburugburu ebe obibi na-anọ n'ọnọdụ dị elu na elu na mmepe na nyocha nke ụlọ ndị maara ihe na mba m. Naanị site na ijikọ ebe ọkụ na ngwaahịa na nkwupụta azụmaahịa azụmaahịa na-aga n'ihu na ịgbanwee usoro ọwa ahịa azụmaahịa ka anyị nwere ike nweta mmepe ahụike.
Isi agba usoro nke table tennis roba